कलियुगका कुरा: मानिसको जीउमा लेख्न पाए हात्तीले के लेख्दो हो ?
मानिसको जीउमा लेख्न पाए हात्तीले के लेख्दो हो ?
हाम्रा नेताले बेलाँ स‌‌विधान नलेखिदिएर यो हात्तीले पनि दुःख पाएछ। यसरी जनावरको जीउमा मानिस (?)ले के के लेखर घुमाएको देख्दा धेरैजसो मेरो मनमा लाग्छ, यी जनावर (यसमा चाहिँ यो हात्ती) ले मानिसको जीउमा केही लेखेर शहर घुमाउन पाउने भए के लेखेर घुमाउँथे होलान् ?
मकवानपुरको मनहरीमा स‌विधान निर्माणका सम्बन्धमा गरिएको बहसमा हात्तीलाई प्रयोग गरिएको रहेछ। फेसबुकका मित्र सुशिल कोइरालाले यो फोटो पठाउनुभएको हो।
मेरो नाम सुजु, नेत्र तामाङ, Anuj Shrestha and 41 others like this.
Dipesh Autumn आचम को हुन्थो नि,,
Kishor Paudel ye le ta dai sahar hoina on the spot ghumayera chhatidintyo hola ni
Krisu Chhetri dipak ji yo hatti lai baru ali samjhayera hamra neta lai ghumaudai dada katai de bhannu parla ki
सुशिल थापा इनोक bigreko desko bhatkeko chal jj man lag6 soesoe gar
Krishna Thapa nice Deepka ji ,
Ramesh Adhikari दीपक जी अाजसम्म तपाइलार्इ पढीमात्र रहेकेा थिएँ । तर अाज कमेन्ट नगरि मन नै मानेन । वा दीपकजी, त्यति थेारै शब्दमा कति धेरै कुरा भन्नुभेा । साधुबाद तपाइलार्इ ।
Kedar Pyakurel यो हात्तीले मानिसको जीउमा केही लेखेर शहर घुमाउन पाउने भए के के लेखेर घुमाउँथ्यो होला ? hahahah... yo kura thik ... " haina neta harule chai FB chalaudainan hola dipak ji ???????????
Ganesh Bhattarai sambidhan banauna gareyeko asambidhanik kiryakalap
Maheshwar Ghimire hahahhaah Dipak jee : tyo nara hune thyo " ma mathi dherai chadeu manusse aao aba ma chadchhu timaru mathi" HAhahahahahahhahah